मन को कुनामा रहेको तितो अनुभव | जनदिशा
मन को कुनामा रहेको तितो अनुभव
सेतो आइरन गरेको शर्ट र कलर बाहिर देखाउनलाई लगाईएको सुनको सिक्री, गोरो अग्लो, हेर्दा हिरो जस्तै देखिने, बोलीमा आफ्नै किसिमको तडक भडक थियो । यहाँ जस्तो देखिन्छन् त्यति नै धनी हुदैनन् मान्छे । म पनि त धनी छु । फरक यति हो धन छैन तर ठूलो मन छ, ठूलो सोच छ, धनीहरुको प्रतिस्पर्धामा आफैलाई उभ्याउँछु ।
जहिले पनि आफुलाई धनी नै छु जस्तो लाग्छ । काली कानमै आएर बोल्छे धत् लाटा यिनिहरु पैसाको कुरा गरेका छन् तिमी मनको कुरा नगर, अक्सर जब म मौनतामा हराउँछु काली आईहल्छे मेरो मौनता भंग गर्न, जिस्काउन र सम्झाउन।
सबै ठीक छ मैले भनिदिएको छु, अब सर एकछिनमा आउनुहुन्छ तम्तयार भएर बस्नु उ बोल्यो । हस सर, भनेर म लाईनमा नै खडा भए । भनेपपछि फेरी अर्को सर पनि रहेछन् ।
यहाँ सम्म आइपुग्दा मैले ३ जनालाई सर र तपाईं भनेर सम्बोधन गरिसके। सायद स्कुल पढ्दा यति सम्मान पढाउने सरहरुलाई गरेको थिईन होला जति सम्मान आज यी अपरिचित हरुलाई गर्दै छु । सेतो बोलेरो गाडीमा कालो कोट ठूलो भुँडी उहीँ चाला घाँटीमा ठूलो सुनको सिक्री हातमा ब्रासलेट । देब्रे हातले केही कागजपत्र बोकेको जस्तो मानिस सरासर गेटबाट भित्र आयो । सबैले नमस्कार गरे दाइने हातले माथी नमस्कारको उत्तर दिदै सरासर उ भित्र पस्यो ।
पालो आयो भित्र पसे बस्नलाई अनुमती दिए । भाई कहिल्यै बिदेश गएका छौ ? के छ सीप ? जानेको केही छ अंग्रेजी, बोल्न आउँछ ? यस्तै सामान्य प्रस्न गर्यो । प्रश्नका हरेक जवाफहरु मलिन र भद्र भएर दिए । डकुमेन्ट हेरे र कालो कलमले केही लेख्यो र भन्यो फाईनल अन्तबार्ताको लागि ४ गते आउनु आज लाई डकुमेन्ट यहि छोडेर जानू। हस सर भनेर बाहिर निस्के।
अनुहारमा फुस्रो सपनाका डिम्पलहरुको लाईनमा थिए म । कोही बोल्छन्, मलाई त केही सोधेन यार एकै चोटि फाईनलमा पठायो, कोही बोल्छन् खोइ डकुमेन्ट मिलेन रे । म अचम्मित भए यहाँ पैसा तिरेर आफ्नै लिलामी गर्नु पर्ने, सीप सिकेर नि आफ्नै पैसाले बेचिनु पर्ने, भविस्य खोज्न विदेश जानै पर्ने । अवाक छु म बेचैनका उदासी पनलाई मन भित्र कुन्ठित गरेर माईक्रो चढे । गाडी भित्र बजिरहेको थियो हिन्दी गीत ‘तुज्से नाराज नहि जिन्दगी, हैरान हु मे, हो हैरान हु मे, तेरे मासुम सवाल से परिसान हु मे हो परिसान हु मे’
Previous Previous post: राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रदेश सरकारको चासो
Next Next post: आत्मनिर्भरताको बाटोमा प्रदेश नं ७ !